Jowhar.com : Somali Leader News - News: Daawo Sawirada qaabkii loo qabtay Buulo Burde iyo ciidamada Jabuuti oo dhex galay shacabka
April 20 2014 21:56:36
Daawo Sawirada qaabkii loo qabtay Buulo Burde iyo ciidamada Jabuuti oo dhex galay shacabka
Ciidamada Jabuuti ee ka socda AMISOM ayaa durba dhex galay shacabka Buulo Burde, kadib markii Khamiistii ay la wareegeen ciidamada wada jirka ah degmadan muhiimka ah.
Saraakiisha hogaamineysa ciidamada Jabuuti iyo Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa meel fagaare ah kula hadlay shacabka Buulo Burde, iyadoo la arkayay qaar ka mid ah dadweynaha oo wata calanka Jabuuti iyo kan Soomaaliya.
Inkastoo inta badan dadkii shacabka ee ku dhaqnaa degmada ay isaga baxeen ayaa hadana shacbkii ku haray degmada oo meel fagaare ah la isugu yeeray ayaa waxaa la hadlay Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan cabdi Faarax Laqanyo.
Mr Laqanyo ayaa ka codsaday shacabka Buulo burde inay la shaqeeyaan ciidamada Hiil Walaal, isla markaana ay ku gacan siiyaan howl galka, waxaana uu sheegay inay ammaanka sugi doonaan, ayna jiri doonin cid dhibaato loo geysto.
Goobtan ay isugu soo baxeen dadka Buulo Burde ayaa aheyd halkii labo todobaad ka hor uu ka dhacay banaan bax looga soo horjeeday ku biirista Ciidamada Itoobiya ee AMISOM, iyadoo ay muuqato in dadweynaha hadba ninkii maamula ay la jiraan.
0 Comments · 11800 Reads
Jowhar.com687,312 unique visits